यसरी बढ्दै छ विदेशी पुरुषसँग नेपाली युवतीको अनमेल बिहे !
प्रकाशित मिति : June 21, 2019
काठमाडौँ नागार्जुनकी ३६ वर्षीया महिलाले चीनको हेनान प्रान्तका ५६ वर्षीय पुरुषसँग विवाह गरिन्। दुवै जनाले मंसिर ८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता विवाहका लागि निवेदन दिए।सबै कानुनी प्रक्रिया पुगेकाले निवेदन स्वीकृत भयो। न्युयोर्क बस्ने ६५ वर्षका पुरुषसँग खोटाङकी ३३ वर्षीय युवतीले विवाह गरिन्।दुवैजनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई दर्ता विवाहको प्रमाणपत्र लिए। उनीहरु कात्तिक २९ गते दर्ता विवाहका लागि कानुन व्यवसायीसहित अदालत पुगेका थिए।
४८ वर्षीय भारतीय पुरुषले २४ वर्षकी नेपाली युवतीसँग विवाह गरे।युवतीको भन्दा दोब्बर उमेर भएकाले उनले अदालती विवाह गरेका हुन्।यो अदालतली विवाह जेठ ८ मा भएको हो। विदेशीसँग भएका यी अनमेल विवाहका उदाहरण प्रतिनिधिमूलक हुन्। पछिल्लो समय काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेर यसरी विवाह गर्नेको संख्या बढेको छ। उमेर हेर्दा आफूभन्दा १० देखि ३२ वर्ष जेठा विदेशी पुरुषसँग नेपाली युवतीले विवाह गरेका छन्।
यसरी दर्ता विवाह गर्नेमा अधिकांश पुरुष विदेशी र युवती नेपाली छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेकी छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै नेपाली युवतीले अमेरिकी पुरुषसँग विवाह गरेका छन्। अस्ट्रेलिया, बेलायत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, क्यानडा, फिलिपिन्स, फ्रान्स, बंगलादेश, मलेसिया, पाकिस्तान लगायत देशका पुरुषसँग पनि नेपाली युवतीले अदालती विवाह गरेका छन्। भदौ १ देखि लागू भएको देवानी संहितामा जिल्ला अदालतमा ‘दर्ता विवाह’ गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
‘विवाह दर्ता’ का लागि भने सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ कानुन कार्यान्वनयमा आएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट करिब हजार जनाले दर्ता विवाह गरेका छन्। जिल्ला अदालतको तथ्यांक हेर्दा भदौयता ९९७ जनाले विवाह गरेका छन्। त्यसमध्ये २६१ नेपाली युवतीले अमेरिकी पुरुषसँग, ४८ जनाले बेलायती पुरुषसँग, २७ जनाले अस्ट्रेलियाली पुरुषसँग, २६ जनाले चिनियाँ पुरुषसँग, २० जनाले जापानी पुरुषसँग, १८ जनाले क्यानेयिन पुरुषसँग, १० जनाले दक्षिण कोरियाली पुरुषसँग र पाँचजनाले फिलिपिन्सका पुरुषसँग विवाह गरेका छन्। यसरी बिहे गर्ने पुरुषमा कतिपय गैरआवासीय नेपाली पनि छन्।
दुईजना साक्षीसमेत राखी प्रमाण पु¥याएर विवाह गर्न आएपछि जतिसुकै उमेर अन्तर भए पनि अदालतले केही भन्न नमिल्ने स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले बताए।विदेशी, नेपाली दुवैको हकमा विवाह नभएको प्रमाणसहित नागरिकता, राहदानी पेस गरेपछि अदालती विवाह हुने गरेको छ। अदालतको प्रमाणले मान्यता पाउने भएकाले विदेश जानेहरु दर्ता विवाहका लागि आउने गरेको उनले बताए।विवाह व्यक्तिगत चाहनाको विषय भएकाले अदालतले कानुन अनुसार दर्ता गरेको उनले बताए। कहिलेकाहीं अनमेल विवाह भएका कारण अध्यागमनबाट समेत नपत्याएर अदालतमा फोन आउने गरेको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए।
‘अदालतबाट बिहे गर्नेमा विदेश जाने बढी छन्। कति त नेपालमै बसोबास गर्ने पनि छन्,’ उनले भने, ‘विदेश जाने चलन बढेकाले त्यसबाट प्रभावित भएर हुनसक्छ विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिला बढेका छन्।’ ग्रीन कार्ड लिएका गैरआवासीय नेपाली पनि नेपाली महिलासँग विवाह गरेको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए। ‘विदेशीसँग नेपाली महिलाले उमेर नहेरी विवाह गरेको देखिन्छ,’ उनले भने।
दम्पतिबिच फाटो आउँछ तब उनीहरु एउटै छानोमुनी बस्न सक्दैनन् र अलग हुन बाध्य हुन्छन् । पति पत्नीबिचको महत्वकांक्षा पनि कहिलेकाही दाम्पत्य सम्बन्धमा फाटो ल्याउने कारण बन्छ । एक विवाहित महिलाले घरको संघार नाघेर बाहिर आउनु बिद्रोह गरे जतिकै हो ।कतिपय यस्तो परिवार हुन्छ जहाँ यस्तो अशोभनिय काम गर्नु र आफुलाई खुुम्चाएर राख्न सक्दैनन् । उनीहरुले आफ्नो इच्छा आंकाक्षालाई खुम्चाएर राख्न बाध्य हुन्छन् । घरको परिधिबाट बाहिर जान खोज्दा पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा मतभेद आउँछ । कारण सम्बन्धले अर्कै मोड लिन्छ । कतिपय श्रीमती उच्च महत्वकांक्षा हुने हुँदा उनीहरु परिवारको परिधिबाट बाहिर आउन चाहन्छन् ।यस्तो अवस्थामा श्रीमान श्रीमतीको मतभेद मिल्दैन् । यस्तै कुरालाई नियाल्नै जाने हो भने के श्रीमती महत्वाकांक्षी हुनु समस्या हो त ? भन्ने जटिल प्रश्न आउन सक्छ । किनकी हाम्रो समाजमा एक विवाहित महिलालाई परिवार सम्हाल्ने दायित्व दिएको हुन्छ ।